Chii chinonzi dhipoziti chebhangi: Yakagadzirwa kupi uye mhando dzinozivikanwa kwazvo | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi bhangi dhipoziti
Claudi casals | 04/10/2021 16:38 | Deposits
Kunyangwe paine chokwadi chekuti mabhengi emari anozivikanwa, vashoma vanhu vanoziva zvavanonyatso sanganisira. Kujekesa chero kusahadzika kunogona kuvapo, isu ticha tsanangura Chii chinonzi bhangi dhipoziti.
Muchikamu chino tichakurukura mashandiro anoita mashandiro, kwaanogona kugadzirwa uye ndeapi marudzi akanyanya kufarirwa.
1 Chii chinonzi dhipoziti mubhangi?
1.1 Ko dhipoziti inoitwa kupi?
2 Mhando dzemabhangi anoisa
2.1 Kuda mari yebhangi
2.2 Nguva yekubhangi dhipoziti
2.3 Bhangi rinoisa nemubhadharo mune imwe mhando
2.4 Mumwe nemumwe wenguva refu-account yekuchengetedza (CIALP)
2.5 Bhangi rinoisa pamubhadharo wakasiyana
2.6 Dhipatimendi rakagadziriswa
Chii chinonzi dhipoziti mubhangi?
Kana tichitaura nezve dhipoziti yebhangi, tiri kureva chigadzirwa chekuchengetedza. Chaizvoizvo mutengi anopa huwandu hwemari kubhangi, kana kiredhiti institution, kune imwe nguva yenguva. Kana imwe nguva yapfuura, sangano rawakapa mari yacho rinoridzorera kwauri. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mutengi haangodzore mari yekutanga chete, asiwo muripo wakabvumiranwa nebhanga. Kune akatiwandei emhando dzemabhangi, uye isu tichazokurukura nezvadzo gare gare, asi chakanyanya kuwanda ndeyekugadziriswa kufarira. Zvese purofiti uye purofiti zvinoramba zvisina kuchinja kusvika pakupera kwetemu.
Iko purofiti inopihwa nebhangi, kana iyo kiredhiti institution, zvine chekuita nemari yakaiswa mukati menguva yakati inozivikanwa seTIN (zita rezita rehuwandu). Kazhinji, iyo yakareba iyo nguva yakabvumiranwa, inowedzera iyo chikamu chemubereko chinopihwa nebhangi. Nezve iyo inoshanda purofiti yedhipoziti, iyi inonzi APR (yakaenzana yegore ratero). Inosanganisira mari, makomisheni uye mubereko. Izvi zvinobvumidza kutengwa kwezvigadzirwa zvinopihwa nemabhangi akasiyana.
Ko dhipoziti inoitwa kupi?
Zviri pachena kuti zvichanetsa kuenda kubazi rebhangi kunoisa mari nenzira yechinyakare. Pakati pebasa nemaawa ehofisi, Kutsvaga mukaha mune yedu purogiramu inotibvumidza kudonhedza imwe mari inotora nguva uye inogona kunetesa. dzimwe nguva. Kunyangwe nemasangano emabhengi akasimbiswa nekuda kwekubhengi kwepamhepo kwakagadzirwa kunze kwekuwandisa kweinternet, kuenda iwe pachako uye kumirira kuti uonekwe kunogona kutora nguva yakareba kune hupenyu hwedu hwakabatikana.
Nhasi tine zvatinogona dzakasiyana siyana dzekutengesa dzatinogona kuita kure. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, kuendesa uye kubhadharisa online nekadhi rechikwereti.
Asi chii chatinoita kana tikatambira mari? Izvi zvakajairika uye sezvingabvira tinoda kuzvichengeta zviri nyore, zvakachengeteka uye nekusagadzikana kudiki kuri mubhangi. Neichi chikonzero kune nzira dzakasiyana dzinotitendera kuti tikwanise dhipoziti, senge sarudzo yekuisa macheki. Nenzira iyi hatifanire kutakura kana kutakura huwandu hwemari, izvo zvinogona kusagadzikana kuvanhu vazhinji.
Uyewo, MaATM (multifunctional automated teller michina) ave aripo kwemakore mazhinji. Izvi zvinokutendera iwe kuti uite nhamba hombe yekutengesa kwakasiyana, pakati payo ndiyo sarudzo yekuita mari. Zvichienderana nenzira yaticha sarudza, isu tinenge tichida zvinhu zvakasiyana. Nekudaro, iye mubati wekambani anozotipa isu zvese zviridzwa zvatichada. Ehe, hazvikuvadze kutakura chinyoreso kana penzura zvingangoitika.
Mhando dzemabhangi anoisa
Pasina mubvunzo, chigadzirwa chaunofarira kuchengetedza chevaSpanish imari yekubhangi. Uye hazvishamise, nekuti kushanda kwayo kuri nyore. Sezvatakatsanangura kare, mutengi anongofanirwa kuendesa mari kubhangi pane imwe nguva yenguva. Kana temu iyoyo yapera, bhangi rinodzorera mari yakasimwa uye mubereko wavakange vabvumirana pakutanga. Nyore here?
Zvakanakira kuisa dzakasimba kwazvo, kunyanya munguva dzinonetsa. Tichazonyora zvimwe zvacho:
Ivo vane garandi yakapihwa ne dhipoziti garandi fund.
Ivo vari pachena.
Zviri nyore kwazvo kuvashandira uye kutevera gare gare.
Ivo vane dzakasiyana dzakasiyana nguva yenguva, sezvo isu tichigona kuwana yakareba, yepakati nepfupi yenguva dhipoziti.
Uyewo, kune mhando dzakasiyana dzemabhangi. Iyo ingori nyaya yekutsvaga iyo inokodzera zvatinoda uye zvinangwa. Tevere isu tichataura pamusoro pemabhangi makuru.
Kuda mari yebhangi
Iyo inonyanya kuzivikanwa bhangi dhipoziti ndiyo inonzi "pakudiwa". Ndiwo zvakare wakasviba uye wakanyanya kubatwa, nekuti nayo unogona kuwana mari nguva dzose. Ndokunge, hapana nguva panguva yatisingakwanise kubata iyo mari yakaiswa. Akaverengeka maakaundi, kusevha uye kutarisa maakaundi zvinoda mari muitiro.
Kazhinji, zviri nyore kwazvo uye haufanire kuzadzisa zvakawanda zvinodiwa kuti uvhure imwe. Chinangwa chekuda mari yemabhangi ndeyekuita sekutsigira kwekushanda kuburikidza nemabasa akasiyana siyana anogona kuitwa, akadai sekupinda muaccount, kuita mubhadharo kana kuchinjisa, kunanga madisiti ekubhengi kana kutora mari kubva muATM. Rudzi urwu rwe dhipoziti harutombo kupa purofiti, kutaura zvishoma.
Nguva dzose, kudiwa kwemabhangi emadhipoini kunosanganisira muunganidzwa wemari yehutariri, yezvakanyanya kuwedzerwa paakaundi, yekuchinjisa, yekuchengetedza, nezvimwe. Zvakadaro, Mazhinji emabhangi anopa mutengi zvimwe zvakanakira kana mabhonasi kana iwo mubhadharo kana imwe huwandu hwemarisiti ebhangi akabhadharwa nedhidhiti yakananga.
Nguva yekubhangi dhipoziti
Kusiyana neiyo yapfuura, izwi rekuti bhangi dhipoziti rine chinangwa chekudyara. Iyo inozivikanwa zvakare seyakagadziriswa-izwi dhipoziti kana seyakagadziriswa-izwi dhipoziti. Iko kushanda ndiko kwatatsanangura pakutanga kwechinyorwa ichi: Mutengi anoendesa mari yakawanda kubhangi uye oidzorera mushure menguva yakati yenguva yakange yabvumiranwa kare, pamwechete nechibvumirano chakabvumiranwa.
Chaizvoizvo irwo rudzi rwechikwereti icho munhu anoita kubhangi. Mukudzoka, inozopomera chimbadzo icho chakange chatenderanwa kare. Naizvozvo, nguva yekubhangi dhipoziti inogara iine zuva rekukura. Mushure mezuva iro, mutengi anogona kurasa zvakasununguka mari yake.
Kana zvikaitika kuti munhu wacho anoda mari zuva risati ratenderanwa, achasungirwa kubhadhara komisheni kana chirango che kukanzura dhipoziti Kufanoita. Nekudaro, kune mamwe asingabhadharise chero chirango. Izvi zvinofanirwa kugara zvichitariswa zvakaringana muchibvumirano.
Nhasi, iko kubatsirwa kwerudzi urwu rwechipo kwakadzikira, zvirinani kuSpain. Nekudaro, isu tinogona nyore uye zvakachengeteka kuwana madhipatimendi eEurope ane zvakanaka kudzoka.
Bhangi rinoisa nemubhadharo mune imwe mhando
Kune mamwewo mabhanga ayo Vanoedza kukwezva vatengi nekuvapa zvipo kwete mari. Zvipo zvinowanzo kuve zvinhu zvese zvido, senge materevhizheni, mutambo wekunyaradza, michina yekicheni, bhora renhabvu, nezvimwe. Mari idzi dzinosungawo mutengi kuti achengete mari imomo kwenguva yakatarwa muchibvumirano. Kana iwe uchida kuwana mari pamberi penguva, uchafanirwa kubhadhara chirango. Izvi zvinowanzoenzana nemutengo wechipo chawanikwa.
Mune ino kesi, iyo purofiti yedhipoziti haisi mari, asi panzvimbo pezvo muripo mune imwe, sekuratidzwa kwezita rayo. Asi chenjera, kunyangwe tikasagamuchira mari, chipo chacho chinobvisiswawo mutero. Naizvozvo, iwe unofanirwa kubhadhara mutero pane chirevo chemari.
Mumwe nemumwe wenguva refu-account yekuchengetedza (CIALP)
Yemunhu marefu-enguva ekuchengetedza maakaundi, anozivikanwawo seCIALPs, iri mhando nyowani nyowani yebhangi dhipoziti. Ivo vakazvarwa mu2015 pamwe chete neyakareba-refu inishuwarenzi yekuchengetedza, kana SIALP. Sezvaunogona kufungidzira, aive mabhanga aishambadza maCIALP uye nemakambani einishuwarenzi ayo akatengesa maSIALPs. Ose ari maviri anotarisirwa kukurudzira kuchengetedza kwevanhu munguva refu. Muchokwadi, mari haigone kununurwa kubva kumaaccounts kusvika makore mashanu. Nekuda kweichi chikonzero ivo vanozivikanwa se "Savings Plan 5".
Rudzi urwu rwebhangi dhipoziti rine mukana asi zvakare kusakosha. Pfungwa yakasimba ndeyekuti Inosunungurwa pamutero kana uchiita chirevo chemari kana makore mashanu apfuura. Nekudaro, ine iyo yegore yekuponesa muganho wakaiswa pamazana mashanu ezviuru emubhadharo wega wega. Iyo inshuwarisi ndeyangu uye iri muzita remunhu mumwechete.
Bhangi rinoisa pamubhadharo wakasiyana
Kana zviri zvekuisa mabhengi pamubhadharo wakasiyana, iwo akaomesesa kupfuura iwo apfuura. Muzviitiko izvi, mutengi haazive kufarira kwaachawana mari yaanosiya muaccount, sezvo zvinoenderana nekodhi yakatarwa. Kazhinji ndiyo iyo Euribor. Mazhinji mabhangi anopa saver iyo Euribor goho uye yakatarwa kupararira. Saka mutengi anovimbiswa chete musiyano. Asi kunyangwe izvo zviri munjodzi tichifunga kuti iyo Euribor haina kunaka.
Pakupedzisira isu takasara nemadhipatimendi akarongeka. Aya ndiwo akaomesesa uye akagadzirirwa vanhu vane ruzivo rwakasimba rwemari. Pano zvakare, purofiti yako inogona kutsamira paEuribor, asi zvakare kune mamwe masheya, senge pasuru yezvikamu. Iva zvazvingaite, iyo yakadzorerwa kudzoka idiki kwazvo uye inoenderana zvakanyanya nekushanduka kwezvinhu. Uye zvakare, aya madipoziti ane mashoma kwazvo emari.
Zvino zviri kwauri kuti usarudze kana iwe uchida kuisa mari yako mubhangi dhipoziti kana kana iwe uchida kuzvibata iwe pachako pamusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Deposits » Chii chinonzi bhangi dhipoziti
Chii chinonzi tax data